Nquma Kakade: Thwebula futhi Ubeke Impendulo | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 11, i-2014 Douglas Karr
Siyawathanda amathuluzi athatha imininingwane evela kumakhasimende, kepha asikho isixazululo esilinganayo. Kwesinye isikhathi udinga izinketho zemibuzo ehlukile, kwesinye isikhathi umbuzo onamandla nempendulo, kwesinye isikhathi udinga ukwenziwa okomuntu siqu. Ngicelwe ukuba ngibe yijaji e-Indianapolis ' Imiklomelo yeTechPoint Mira okwa-2014 noJoshua Hall usebenzisa ithuluzi lamajaji ukubamba imininingwane nokuvota kulowo nalowo oqokiwe. Ithuluzi elihle elingenye yokukhishwa kwezinto ezintsha ama-incubators eSproutBox.
Usebenza Kanjani Ngokunquma
Nquma Kakade yehluke kancane kokunye… iyithuluzi elisheshayo (futhi okwamanje elimahhala) elikuvumela ukuthi usabalalise umbuzo wokuvotela noma wokubeka futhi uthole izimpendulo ngokushesha nangaphandle kwamandla.
Nazi Izizathu ezi-5 zokubhalisela ukungena kusuka kokunqumaOkuvele:
Kumahhala! Kusetshenziswa i-DecideAlready ukwenza izinqumo kumahhala. Izindlela zethu ezilula nezilinganiselwe zizohlala zikhululekile. Ngisho nendlela yethu yesinqumo esithuthukile, equkethe i-DecideAlready Decision Machine imahhala isikhashana.
Qeda i-imeyili ecasulayo 'Phendula-Konke' - Uma ubuza iqembu labantu ngemibono nge-imeyili, uvame ukuvusa uchungechunge lwezimpendulo. Iningi labahlanganyeli bakho banentshisekelo enkulu yokuthola uvo lwabo kunokuzwa wonke umuntu.
Yenza Izinqumo Ngokushesha - Ezinye izinqumo zidinga ukwenziwa ngokushesha. Nquma isivele icela impendulo khona manjalo futhi ibala imiphumela ohambeni. Unenketho yokukhawulela isikhathi sezimpendulo. Umshini Wokunquma Ovele Usukhona ungabala imiphumela yakho ngokuzenzakalela bese uthumela isinqumo sokugcina kubahlanganyeli bakho.
Yakha Ukuzethemba. Yakha Ukuvumelana - Uma wenza isinqumo usebenzisa i-DecideAlready, bonke ababambiqhaza bakho bazokwazi ukuthi izwi labo liyezwakala. Bazokwazi nokuthi ukufaka kwabo kubhekwe njengokufanele, nokuthi isinqumo senziwe ngobunyoninco.
Umshini Wokwenza Isinqumo - Inamandla futhi Kumnandi! Umshini Wokunquma Osevele kukusiza ukuthi wenze izinqumo eziyinkimbinkimbi kakhulu kalula. Abahlanganyeli bakho bangakala ngayinye yezimpendulo zakho ngokuya ngemigomo ethile. Lapho ukuvota kuvalwa, ungalungisa ukubaluleka kwendlela ngayinye. Isinqumo Machine sibikezela umphumela wezenzo zakho esinqumweni sokugcina ngokushesha!